“Ma ilaawi doono goolkeygii ugu horeeyay La Liga, xili kasta goolasha kulamada El Clásico waa kuwo gaar ah” Messi – Gool FM
(Barcelona) 16 Jan 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ka dhawaajiyay sida uu ugu faraxsan yahay inuu gaaro goolkiisa 400-aad ee taariikhda xirfadiisa kubada cagta horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Lionel Messi ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay guushan uu gaaray:
“Waan kufaraxsanahay inaan gaaro goolkeygii 400-aad, waxaana rajeenayaa inaan dhaliyo goolal intaas kasii badan”.
“Waxaan diirada saara kulanka kasta ee ka mid ah tartamada, waxaana doonayaa inaan badino si aan u helno 3 dhibcood ee cusub, waxaan u dagaalami doonaa ku guuleysiga horyaalka”.
“Waxaan isku dayi doonaa inaan kooxda si weyn u caawiyo ee maahan inaan dhaliyo goolal oo kaliyo, ee waa inaan ka caawiyaa wax walba, xitaa dhaqdhaqaaqa”.
Intaas kadib Lionel Messi ayaa wuxuu sheegay inuusan jecleyn in si gaar ah uu kaga hadlo goolasha, balse dhinaca kale wuxuu sheegay:
“Goolkeygii ugu horeeyay ee aan u dhaliyay kooxda Barcelona horyaalka La Liga, kadib caawin aan ka helay Ronaldinho, ma ahan midaan waligey ilaawi doono”.
“Goolasha aan xili kasta ka dhaliyo kulamada El Clásico waa kuwo gaar ah, iyo sidoo kale goolasha aan ka dhaliyo kooxaha adag sida Atletico Madrid, Valencia iyo Sevilla, iyo kuwa aan ku hor dhaliyay jamaahiirta ku sugan garoonka Cump Nou”
“Balse ugu dambeyntii goolasha ma ahan kuwo ka muhimsan guusha”.
“Waa wax iska cad in hadii aanan caawimaad ka heli lahayn dhamaan saaxiibadeyda, aanay macquul noqon lahayn inaan dhaliyo 400 gool ee ah horyaalka La Liga ee dalka Spain”.
Pogba oo Saakay u Gooyay Tababarka Man United kaddib markii uu AABE noqday markii ugu horreysay, laakiin isaga iyo Gacalisadiisa weli......!!+SAWIRRO